पढ्नुहोस् जिल्लागत विवरण : कहाँ कति ? काठमाडौं उपत्यकामा ४६४ सक्रमित | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पढ्नुहोस् जिल्लागत विवरण : कहाँ कति ? काठमाडौं उपत्यकामा ४६४ सक्रमित
January 23, Sat
पढ्नुहोस् जिल्लागत विवरण : कहाँ कति ? काठमाडौं उपत्यकामा ४६४ सक्रमित
भदौ २४ गते, २०७७ - १६:४६
काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी ३ सय ९६ जनामा संक्रमण पुष्टी भएको छ भने दोस्रो धेरै सिराहा जिल्लामा पुष्टी भएको छ
काठमाडौं । बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा ४ सय ६४ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गराएको जानकारी अनुसार काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी ३ सय ९६ जनामा संक्रमण पुष्टी भएको छ भने दोस्रो धेरै सिराहा जिल्लामा पुष्टी भएको छ । काठमाडौंमा ३ सय ९६ र सिराहामा ८१ जना पुष्टी भएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् – बुधबार १०८१ जनामा कोरोना संक्रमण, १६२ जना आइसियु र २२ जना भ्याण्टीलेटरमा
हेर्नुहोस् पुर्ण विवरण –
भदौ २४ गते, २०७७ - १६:४६ मा प्रकाशित
अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यात पुर्पक्षका लागि थुनामा
काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको घटनामा विशेष अदालतले अख्तियार...
सर्वदलिय बैठकमा कांग्रेसले भन्यो–सरकार सच्चिनुपर्छ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको गलत क्रियाकलापले गर्दा सडकमा असन्तुष्टि...